Maxaad doneysaa in aad ka oggaato Hindise Sharciyeedka Qareennada Soomaaliyeed iyo qodobada ku jira? – Kalfadhi
Wasiirka Cadaalada xuukamada Federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa 2-dii bisha Nov hortagay Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xeerka waxaa uu faah-faahinayaa qaab dhismeedka Ururka Qareennada Soomaaliyeed, wada shaqeyn-tooda, maamulkooda iyo dhammaan howlaha shaqo ee u yaalla.
Xeerka waxaa uu sidoo kale faaf-faahinayaa qaabka loo bixinayo ruqsada qareenimadda, imtixaanada ay marayaan iyo haddii qareenka uu khalad gallo sidii ruqasada loogala noqon lahaa.
Qodobadaasi aan kor kusoo xusnay ayaa ah kuwa ugu waaweyn uguna muhiimsan ee ku jira hindise-sharciyeed, kaas oo loo arko mid muhiim ah.
Ururka Qareennada ayaa noqonaya laf-dhabarta cadaallada haddii sida dasuurka uu qabo loo dhiso, loona madax banaaneeyo, madaama qof kasta oo lagu soo oogo dambi uu u baahanyahay Qareen difaaca kaas oo xaq u siinaya dastuurka dalka.